China ikpere ikpere pad ndị nwoke igwe, ohiri isi na-ehi ụra factory na suppliers | AoFeiTe
Njirimara:Nọgide Na-ekpo ọkụ, Nchebe, Nnukwu Mkpakọ
Aha:Mmanụ a Kụ Knee Nkwado
Agba:Black / ọcha
Nha:M / L / XL
Ụdị:Nkwado ikpere / ikpere ikpere
Ụdị:Na-agbanwe, Soft na Comfort Knee Pads
Ikpere mpe mpe mpe akwa nwoke igwe Machine Ohiri Isi Ihi ụra
Advanced 3-D contoured Ikpere ikpereenye ikpere nkwonkwo mkpakọ. Mere nke oké neoprene. Uwe aka na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọ dị mma. Ihe na-enye obi ụtọ na mkpakọ. Ihe na-eme ka iku ume neoprene na-ejide okpomọkụ ma na-agba ngwa ngwa na nkwonkwo nkwonkwo. Na-enyere aka ahụ ike na nkwonkwo mgbu, nkwesi ike, na ọnya. Na-akwado ọbara eruba & ebelata ọzịza. Na-ebelata ihe mgbu nke mbufụt na ị &ụbiga mmanya ókè. Kwadoro ma na - enyere aka ịkwalite mmegharị maka akwara na nkwonkwo. Na-ebelata nrụgide ma melite nhazi. Na-enye mkpakọ, ikpo ọkụ na nkwụsi ike n'oge mbilite nwụrụ anwụ, pistols na squats. Anyị bụ ndị ọkachamara na nlekọta ahụike na orthopedic ngwaahịa dị ka Ikpere emem nkwado Nkwado, Akwa azụ emem nkwado Nkwado, Ngosi Corrector, Nkwonkwo aka Nkwado, Ikiaka nkwado Nkwado, Mgbehu emem nkwado Nkwado, Jirinụ Aka Nkwado, Olu Nkwado Nkwadowere gabazie. Ọzọkwa otu ọrụ ọrụ anyị bụ Nhazi CUSTOMIZE. Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa na njirimara imewe gị na igbe agba. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ ogologo oge!
Na-achọ ezigbo Ikpere Ohiri Isi Ihi ụra Manufacturer & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. Ngwa igwe igwe niile dị mma. Anyị bụ ụlọ ọrụ China nke mepụtara ikpere ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Mkpakọ Anti-ileghara ikpere Aka
Mkpakọ Sports Knitting ikpere emem nkwado
Mkpakọ Sports ikpere emem nkwado
Kemeghi ikpere support nkwado Daily ndụ ikpere b ...